अर्काको छोरो – मझेरी डट कम
म छाँगाबाट खसे जत्तिकै भएा । रोहण नभएको दिन मैले सपनामा पनि देखेकी छैन । ऊ नभएको रातको कल्पना पनि गरेको छैन । म चिच्याउँदै भन्न चाहन्थाे, तिमी मलाई एक्लै छोडेर जाने कुरै नगर । फेरि विचार गरें “भाग्यले दिने कर्मले ठेल्ने” भन्छन् । मैले त्यसरी अड्डी लिादा हाम्रो ठूलै अवसर पो गुम्ने हो कि ? म गहभरि आँसु जमाएर चुप लागेा । रोहणको मुखबाट पनि एक वाक्य फुटेन । हामी च्याप्प अँगालोमा कसिएर सुत्यौा र अनिदै आँखा लिएर बिहान उठ्यौा ।
आज रोहणसँग अलग भएर सुतेको पहिलो रात, थरिथरिका भय र आशङ्काले थिचेर म मर्माहत भै रहेकी छु । यतिखेर कहाँ पुगे होलान् ? के खाए होलान् ? कहाँ सुते होलान् ? उसको अवस्था मेरो जस्तै होला कि ? यस्ता धेरै प्रश्नहरूमा जेलिादै छु । म एक-एक गरेर केलाउँदै छु, जुन दिन म अन्मिएर रोहणसँग आएा त्यस दिनदेखि हाम्रो मन पनि एकाकार थियो र भौतिक शरीर पनि एकाकार थियो । यस घरमा भित्रिएपछिको पहिलो मासिक धर्मका दिन पलङमुनि ओछ्यान लगाएर सुत्ने तरखरमा थिएँ तर उनले ती लुगा उठाएर कुनामा राख्तै भने “छुनै हुँदैन भन्ने वैज्ञानिक मान्यता मैले कतै भेटेको छैन, त्यसैले हामी एकै ठाउँ सुत्छौं र जिन्दगीभर एकै ठाउँ सुत्ने छौं । ” त्यस रात म निक्कै डराएकी थिएँ । सबैभन्दा धेरै डर मलाई पापको थियो । यस कुरामा मेरी आमा निक्कै अनुदार हुनुहुन्थ्यो र मैले पनि त्यही बुझेकी थिएँ । म माइत जाँदा पनि सँगै जान्थ्यौा, सँगै बस्थ्यौं र सँगै फिथ्र्यौं, तर मलाई उनको सामीप्यताको बोझ कहिल्यैा भएन, झर्को कहिल्यै लागेन । बरु कुनै न कुनै भागमा अतृप्ति बाँकी नै भए जस्तो लाग्थ्यो । म सधैा उनको तातो सास ठोक्किने गरी नजिकिएकी हुन्थें ।
जीवनभरि सँगै सुत्ने उद्घोष गर्ने रोहण आज मेरो साथमा छैन । यो पलङ पनि उराठलाग्दो र कहालीलाग्दो भएको छ । अलिकति आँखा तानेर हेरें एउटा कुनामा सानो ओछ्यान लगाएर कुन्दन मस्तसँग बाल निद्रामा छ । उसलाई बोलाउन मन लाग्यो । “कुसमयमा कसैको निद्रा बिथोल्नु हुँदैन, पाप लाग्छ”, आमाको भनाइ सम्झेा । तर नबोलाई सकिन विस्तारै बोलाएा “कुन्दन” सुनेन, फेरि बोलाएँ, धेरैपल्ट बोलाएपछि ऊ चट्पटायो र हस्याङ फस्याङ् गर्दै उठ्यो ।
“धोएँ । ”
“राम्रोसँग धोएँ, साबुन लगाएर, मुख पनि धोएँ । ”
“तपाईंले दिनुभएको नयाँ लुगा त हो नि केही पनि छैन । मेरो पुरानो लुगामा पनि जुम्रा चाहिा थिएन । ”
“अँ अँ आइज । एक्लै त्यो कुनामा के सुत्छस् । ” मैले एउटा सानो सुत्ने आधार पाएँ । कतिखेर निदाएा पत्तै भएन ।
मेरो छोराले भनेको सुनेर कुन्दनले पनि एकपल्ट मलाई “मुमा” भन्यो । म अलमल्ल परेँ । कुन्दन मेरो छोरो जस्तै मात्र हो तर मेरो छोरो हैन । ऊ कसैको छोरो हो । हुन त रोहण पनि त कसैको छोरो हो नि । म उसको मायामा पागल हुँदैछु । यो कुन्दन, कसैको छोरो, यसको मायामा पनि म लठ्ठ हुँदै गएकी छु । अर्काका छोराहरूको माया किन लाग्छ यसरी, मैले बुझ्न सकेकी छैन । मैले कुन्दनलाई अलिक कडा बोलीमा भने, कुन्दन तैँले मलाई आन्टी भन्नु, आन्टी मात्र भन्नु । ऊ जिल्ल पर्‍यो । मैले उसलाई किन त्यसो भनें मलाई नै थाहा छैन । मेरो छोरालाई मैले ममी भन्न नसिकाएर मुमा भन्न सिकाएँ । अङ्ग्रेजीका यी नाता बुझाउने शब्दहरूसँग मलाई विश्वास छैन । आˆनोपन छैन तर कुन्दनसँग म त्यही रूखो र सारहीन सम्बोधन किन मागिरहेकी छु, म आफैंलाई थाहा छैन ।
रोहण गएको आज दुई वर्ष एघार महिना भयो । अब एक महिनामा म रोहणको बलियो र तातो अागालोमा कसिएर अमेरिकाका मीठा-मीठा कथाहरू सुन्नेछु । शरीर फूल जस्तै हलुङ्गो भएर आयो । भोलि बिहानै उठेर म कुन्दनलाई अङ्कल आउने समय भएको सुनाउने छु र “अब तेरा मसँग सुत्ने दिन सकिए है बाबै”, भन्नेछु भन्दै मीठा कल्पनाहरूले सजिएर निदाएँ । उज्यालो भयो म अरू दिनको भन्दा छिटो उठाे अर्थात् मेरा मनका खुसीका तरङ्गहरूले मलाई सुतिरहन दिएनन् । फोनको घन्टी बज्यो । फोनको रिसिभरलाई झम्टिएँ । रोहण कति तारिखको टिकट छ ? रोहण मलाई पहिले भनन कति तारिखको टिकट लियौं ? म तारिख सुन्न व्यग्र थिएँ तर रोहणले तारिख बताएन, उसले भन्यो “माफ गर लाजवन्ती म अरू दुई वर्ष आउन नपाउने भएँ । ”
एकछिनपछि म कुन्दनतिरै कोल्टे फिरेा, उसलाई लपक्कै अागालो हाले । देब्रे खुट्टा उसको शरीरमाथि राखेँ । यतिले पनि मेरो मन अघाएको थिएन । उसलाई ब्यूँझाएर चल्न, जिस्किन र खेल्न मन लागिरहेको थियो तर उसलाई ब्यूझाउँने हिम्मत गर्न सकिन । अझ म मनमनै कामना गरिरहेकी थिएँ, यो अझ गहिरो निदाओस् । मैले उसको छात्ती नापेा । उसको छात्ती पनि कहिले-कहिले चौडा भइसकेको रहेछ । मैले उसको कपाल मुसारे पिठ्यूा सुम्सुम्याएा, नितम्ब स्पर्श गरे र कम्मरमा हात राखेँ । मलाई झल्यास्स सम्झना भयो, सुरूका दिनमा रोहणको कम्मर पनि त यस्तै पातलो थियो नि । रोहणको सम्झनाले मलाई एकछिन व्याकुल बनायो तर त्यो व्याकुलता धेरैबेर टिक्न सकेन । फेरि मेरो मन कुन्दनको शरीरमाथि नै पोखियो । मलाई अहिले त्यो दिनको कुरा भन्न असजिलो लागिरहेको छ तर पनि म सत्य भनिरहेकी छु । मेरो मन थामिएन, त्यो दिन मेरा हातहरू कुन्दनको नितान्त गोप्य र निजी क्षेत्रहरूमा पनि अतिक्रमण गर्न पुगे र संवेदनशील कित्तामा सल्बलाए । त्यसपछि म कतिखेर निदाएँ, पत्तो भएन । बिहान उठ्ता पलङको डिलमा खुट्टा तल झारेर कुन्दन घोसे मुन्टो लगाएर बसेको थियो । मैले सङ्कोच मान्दै सोधे- कुन्दन के भयो ? उसले घोसे मुन्टो लगाएरै भन्यो “छ्या आन्टी पनि । ”
आज मैले दाहिने पाखुरा कुन्दनको गर्धन मुनिबाट छिराएँ र आकाशतिर दृष्टि लगाएर सुतेँ । कुन्दनको एउटा हात र खुट्टाको भार मलाई महसुस भइरहेको छ तर मलाई त्यो भारसँग कुनै चाख थिएन । मेरा स्मृतिहरू रोहणसँगको पहिलो रातमा हुत्तिएर पुगेका थिए । म डरले लगलग कामिरहेकी थिएँ । रोहणका नरम स्पर्शहरूले मेरो सिङ्गो शरीरलाई कुत्कुत्याइरहेको थियो र समर्पणका लागि उक्साइरहेको थियो । रोहणले मलाई यसरी समातेको थियो कि जसरी शेरले आˆनो सिकारलाई समातेको हुन्छ । म झल्याास्स यथार्थमा फिर्छु । एउटा वलिष्ठ वस्तुले मलाई थिचिरहेको छ । मैले उसलाई ठेल्न खोजिनँ, पन्छाउन खोजिनँ । बरु त्यो आगाको डल्लो जस्तो वस्तुलाई च्याप्प समाते दुई हातले तर त्यो तत्कालै चिसो भो बरफ जस्तो र पग्लिन थाल्यो । मैले समाउँदा समाउँदै शङ्खे कीरामा नून परेजस्तो पग्लिएर पलङमा पोखिन पुग्यो । त्यो अधुरो यात्राले म विचलित हुन पुगेँ । रीस र ग्लानि एकैचोटि मेरो शिरमा चढ्यो । मैले उसलाई कुटें, चिथोरेा, टोकेा र जगल्ट्याएँ । ऊ निर्जीव मुढो जस्तो लडिरहृयो, सही रहृयो । म फेरि सामान्य अवस्थामा आएँ, यस बेला मलाई खुसी लागिरहेको थियो, मैले मनमनै भने “कुन्दन पनि अब योग्य भएछ । ” फेरि मेरा ओठ फुसफुसाए, “रोहणले आज नराम्रो सपना देख्यो होला । “